HTC One M8 နှင့် M7 အသစ်တွင်လွယ်ကူစွာ root လုပ်နည်း။ | Androidsis
Francisco Ruiz | | Android Root, HTC က, လဲ tutorial
အောက်ပါလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာတွင် Android ဖိုရမ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် XDA Developers နှင့် Android အတွက်ဤရိုးရှင်းသော application ကိုဖန်တီးခဲ့သည့်သုံးစွဲသူများအတွက်မှန်ကန်သောနည်းလမ်း HTC One M8 နှင့် HTC One M7 အသစ်တွင် Root ကိုရယူပါ.
နင် ကျွန်တော်တို့သုံးမယ့်ကိရိယာရဲ့အမည်ပါ ၎င်း၏ဖန်တီးသူမှကျေးဇူးတင်ပါတယ် လိုလိုမယ်မယ် y Beaupsအထက်ပါ Android သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖိုရမ်၏ဝါရင့်အသုံးပြုသူများ။
ပထမဆုံးနည်းလမ်းကတော့ဒီနည်းလမ်းကိုပြောပါ HTC One M8 နှင့် HTC One M7 အသစ်တွင် Root ကိုရယူပါ ၎င်းကို Verizon မော်ဒယ်များတွင်သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အချို့သောမော်ဒယ်များသည်ပိတ်ထားသော bootloader များနှင့်ကြုံတွေ့ရသောပြproblemsနာများကြောင့် Root ရရန်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ဒီသင်ခန်းစာမစတင်မီအလွန်ရိုးရှင်းပြီး၊ အသိပေးစာကိုတိုးချဲ့ချင်တယ် XDA အန်းဒရွိုက်အက်ပလီကေးရှင်းကိုတီထွင်သူများကိုယ်တိုင်ကမသက်ဆိုင်ကြောင်းငြင်းဆန်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်သည်။ ယုတ္တိဗေဒငါသည်လည်းမဟုတ် Androidsis သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်တွင်ဘာဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တာဝန်ယူပါမည် အသစ် HTC Oneအကယ်၍ သင်သည်ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များအားလုံးကိုလိုက်နာပါကသာမန်အဆင့်မှဘာမျှမဖြစ်သင့်ပါ။
1 HTC One M8 နှင့် HTC One M7 အသစ်တွင် Root ရရှိနိုင်ပုံ
1.0.1 HTC One M8 နှင့် HTC One M7 ကို Root လုပ်ရန်ခြေလှမ်းများ
HTC One M8 နှင့် HTC One M7 အသစ်တွင် Root ရရှိနိုင်ပုံ
ဤအချိန်ကနေယောက်ျားတွေ XDA para conseguir ဒီ Terminal နှစ်ခုရဲ့ပုံစံကို root လုပ်ပါ, ထိုသို့သာအတူပါပဲ XDA ဖိုရမ်၌ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်ဤလျှောက်လွှာကို download လုပ်၍ install လုပ်ပါ ငါတို့မှာလုံလောက်ပြီ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာကိုတောင်ဝယ်ယူဖို့မလိုပါဘူး။ စဉ်း စား၍ မရနိုင်သောရွေးချယ်စရာ HTC မော်ဒယ်များ။
HTC One M8 နှင့် HTC One M7 ကို Root လုပ်ရန်ခြေလှမ်းများ
Terminal settings မှ Root သို့ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ပြီး execute လုပ်နိူင်ရန်ခွင့်ပြုချက်များကို activate လုပ်တယ် မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များ.
ကျနော်တို့လျှောက်လွှာကို download လုပ်ပြီး install လုပ် နင် ဒီတူညီတဲ့ link ကိုမှ.
လျှောက်လွှာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ HTC One တွင်အသုံးပြုသည်။
ငါတို့ဆင်းသွားပြီ SuperSU တိုက်ရိုက်ကနေ Google Play စတိုး.
ထိုအက, သင်ပြီးသားခွင့်ပြုချက်ရှိသည်ဖို့စီမံပြီးပြီ HTC One M8 နှင့် HTC One M7 အသစ်ပေါ်သို့ root လုပ်ပါ.
ပြီးအောင်လုပ်ဖို့သူတို့ကိုပြောပြပါ နင် execute device ထဲမှာအမြဲတမ်း Root လုပ်မထားဘူး၊ ဒါက terminal ကို reboot တစ်ခုစီမှာ execute လုပ်လိမ့်မယ် ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်စက် Root ရ။ ဆိုလိုသည်မှာ terminal ၏ပြန်လည်စတင်မှုတစ်ခုစီတွင် Root permissions ကိုထပ်မံခံစားရန်တစ်မိနစ်ခန့်ကြာလိမ့်မည်။
ဒေါင်းလုပ် - WeakSauce.apk
[wpv-post-body view_template = »ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ» id = » $ smartphones »]
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC One M8 နှင့် M7 အသစ်တွင် root လုပ်နည်း
ငါ htc one m7 telcel တွင်ထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားသောအခါ application သည်ရပ်တန့်သွားသည်
လျှောက်လွှာကရပ်သွားပြီးငါ့ကို run ခွင့်မပြုဘူးလို့ပြောတယ်။ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
အဆိုပါ Wea တစ် shit
အက်ပလီကေးရှင်းသည် HTC One m7 နှင့်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုရပ်လိုက်သည်
အရူး bato ဟုသူကပြောသည်
အရူး Bato တုံ့ပြန်ပါ
application သည်ရပ်တန့်ပြီး M7 တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ
Irving Gijon Gutierrez ဟုသူကပြောသည်
Irving Gijon Gutierrez အားပြန်ပြောပါ
WeakSauce.apk = poop၊ ဘယ်သူမှရှင်းပြချက်မပေးဘူး၊
ထို့အပြင် wea ငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ပါဘူး !!
သူကငါ့ကို app မတပ်ဆင်ထားကြောင်းပြောပြသလား ဒါကြောင့်ဖြစ်စေအလုပ်မလုပ် !!
ငါနဲ့တခြားသူတွေလည်းအတူတူပါပဲ၊ ဒါက binary system blah blah blah ပဲဆိုတာပါပဲ
Raul အန်တိုနီယို Burgos ဟုသူကပြောသည်
Raul Antonio Burgos အားပြန်ကြားပါ
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ပြန်လည်နာလန်ထူကို install လုပ်နိုင်သလား ??? ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ?
Jorge lopez အားပြန်ပြောပါ
အံ့သြစရာကောင်းသည့် Android Apps: ယနေ့ Auto Pilot Mode
Android တွင် Hotspot တစ်ခုအနေဖြင့် WiFi ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုကိုမည်သို့ညွှန်ပြရမည်နည်း